दार्चुलामा वाढीले पुरिए आधा दर्जन घर, नदीका किनारका बस्ती नै जोखिममा ! | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > समाचार > दार्चुलामा वाढीले पुरिए आधा दर्जन घर, नदीका किनारका बस्ती नै जोखिममा !
दार्चुलामा वाढीले पुरिए आधा दर्जन घर, नदीका किनारका बस्ती नै जोखिममा !
असार २७, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाको नौगाड खोलाले वितण्डा मच्चाएको छ । गएराति परेको भारी वर्षाका कारण दार्चुलामा विभिन्न नदी खोलाहरुमा पानीको बहाब बढेर विभिन्न स्थानमा क्षति गरेको छ ।
बाढीले दुई वटा आरसीसी पूल बगाएको छ भने धुलीगडा खार खलंगा सडक अवरुद्ध छ । धुलीगडा, गोगने, सौकेबगर खार सडकको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको छ ।
दुइ वटा विद्यालय जोखिममा परेपछि विद्यालय बन्द गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीले बताउनु भयो । गाउँपालिका अगाडि रहेको वडा नम्बर ३ को नौगेडेश्वरी प्रावि होपरीगाड र वडा नम्बर ५ मा रहेको समैजी निमावि सौकेबगर विद्यालय जोखिममा परेका छन् ।
विद्यालयको फिल्ड समेत भत्काइसकेको छ । विद्यालय आउन सक्ने अवस्था नभएपछि विद्यालय बन्द गर्न भनिएको छ । खारको आरसीसी पूल, गोधानीको पूल गरी दुई वटा यसपाली निर्माण भएका पूल बगाएको छ । वडा नम्बर ३ मै रहेको मनवीरसिह ठगुन्नाको किराना पसल बगाएको स्थानीय प्रताप सिह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै हरकसिह ठगुन्ना र दलजीत ठगुन्नाको अधिकांश खेती बारी बगाएको छ । धुलीगडा र होपरी जोड्ने गरी गत वर्ष झण्डै २० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको कपडे भेलको पर्खाल बगाएपछि सडक पूरै अवरुद्ध भएको हो ।
यस्तै वडा नम्बर १ को प्रावि लक्सेरीको विद्यालय भवन माथिबाट पहिरो आएपछि विद्यालय पूरै जोखिममा छ भने गोधानी जलविद्युत अवरुद्ध भएको छ । गाउँपालिका भवन नजिक रहेका होपरीगाड वस्ती पूरै जोखिममा छ ।
नौगाड गाउँपालिकाको सिप्टी जोड्ने आरसीसी पूल पूरै जोखिममा छ् ।यस्तै नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको गोधानी खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा क्षेति भएको छ । गरिबी निवारण कोषको ६० लाख बढी लगानीमा निर्माण गरिएको गोधानी खोला लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षेति पुगेपछि उक्त बस्तीहरुमा क्षेति पुगेको छ ।
०७० सालको बाढिले नौगाडमा यस्तै क्षति गरेको थियो । अहिले पनि सो भन्दा ठूलो बाढि आएको मिडिया विकास समाज नेपाल दार्चुलाका सदस्य आनसिँह बडालले बताएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गोकुलेश्वर, प्रहरी चौकी सिप्टी र प्रहरी चौकी दल्लेकबाट प्रहरी टोली उद्धारका लागि ती बस्तीमा परिचालन गरिएको छ ।
उद्धारका लागि खटिएको प्रहरी टोली संग समेत सम्पर्क हुन नसकेको प्रहरी चौकी सिप्टीले जनाएको छ । बाढी पहिरोले ग्रसित उक्त बस्तीमा विभिन्न पशुचौपाय, अन्य भौतिक क्षेति भएपनि मानबीय क्षेति भने नभएको प्रहरी जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका सुनिल छिदालको ‘मेरो सपना’ले पायो चर्चा (भिडियोसहित)
पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्ने दुई जनालाई जरिवाना सहित सजाय
मोदीको यात्राको लागि काठमाण्डौका यी क्षेत्रहरुमा कुनैपनि सवारी चल्न नपाउने
विप्लपका कार्यकर्ताले गरे मध्यबानेश्वरस्थित सरकारी गाडीमा आगजनी
अफगानिस्तानमा फेरी पनि १४ लडाकू मारिए ! पढ्नुहोस्